Magaalo iska diiday in sawirro lagu galo dhexdeeda – Quruxsanaanteeda awgeed! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka June 10, 2017	0 177 Views
Geneva (Himilonews) – Dhacda buuraha Alpa una dhow kob-dalxiiseedka St. Moritz, Bergün/Bravuogn waa mid kamid ah xaafadaha buuraleyda kuwa ugu qurux badan ee qaaradda Yurub. Aad u qurux badan, oo dhabtii sawirrada laga qaaday ee lagu baahiyo baraha bulshada ay dad badan ka dhigtay inay ka niyad-jabaaan – nasiib xumo – inaysan booqan karin. Sidaas darteed, waaxda dowladda hoose ee magaalada ayaa hadda mamnuucday in sawirro lagu galo halkan.
Previous: Ey saddex sano sugayay Milkiilihiiisa aan soo noqon doonin!
Next: Idaacadda Himilo oo qabanaysa tartan Qur’an Aqris.